Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid, Laa Liigaa- Masaanummaa dorgommii kubbaan olii - BBC News Afaan Oromoo
Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid, Laa Liigaa- Masaanummaa dorgommii kubbaan olii
Goodayyaa suuraa Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid masaanummaa bara dheeraa qabu
Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid kilaboota gurguddoo Laa Liigaa Ispeen keessatti hedduu beekamanidha. Taphoonni kilaboota kanneen lamaan gidduutti taphatamus taphoota kamiyyuu caalaa Laa Liigaa irra darbee guutummaa addunyaatti daawwatamudha.
Taphni Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid gidduutti taphatamu kunis maqaa El Kilaasikoo jedhamu kennameeraaf.
El Kilaasikoo jechuun Afaan warra Ispeeniitiin, tapha baay'ee cimaa gareewwan masaanuu ta'an lamaan, Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid gidduutti taphatamu guutummaa addunyaarratti beekamu ta'eera.
Jechi El Kilaasikoo jedhu kunis jaqaba jaarraa 21'n booda faayidaarra oole.
Himannaan gudeeddii Ronaaldoo irratti dhiyaate 'Nike' 'yaaddeseera'
Mucaan leenjisaa duraanii Baarseloonaa boqatte
Dorgommii kilaba biyya tokko keessatti gaggeeffamu ta'ee garuu sadarkaa addunyaatti daawwattoota hedduu qabaachuun hunda caala.
Taphni kilaboota kanneen lamaan gidduutti gaggeeffamu giddu-galeessaan nbamoota miliyoona 500 ta'aniin daawwatama.
Masaanummaan Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid gidduu jiru kun maaliif dorgommii kubbaa miilaan ol ta'e?
Masaanummaan isaanii kun seenaa ijaarama biyya Ispeen waliin walqabata. Seenaa keessatti warri Katalooniyaan mootii abbaa hirreedhaan hacuucamaafi kabaja dhabaa turan.
Katalooniyaan maqaa warra Barseloonaa ka biraati.
Kanaaf, karaan tokkichi warri Baarseloonaa kun ittiin mootummaa haaloo ittiin baana jedhanii yaadan masaanuu isaanii kan ta'e Riyaal Maadiriidiin mo'achuun qofaa akka ta'etti yaadu.
Sababiin akka taphni Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid gidduutti gaggeeffamu taasise inni biraan taphattoota kubbaa miilaa sadarkaa addunyaatti beekamoo ta'an horatu ykn jijjiiraan fudhatu.
Keessumaa waggoota dhiyoo asitti taphattoonni ciminaan badhaasa gama kubbaa miillaan addunyaatti waldorgoman Li'oneel Meesiin Baarseloonaaf Kiristaanoo Ronaaldoo ammoo Riyaal Maadiriidiif yeroo taphatan masaanummaa seenaan kilaboota kana gidduu jiru akkaan jabeesseera jedhu namoonni seenaa kilaboota kana lamaanii qoratan.
Hunda caalaa garuu waggoota 300n dura, seenaa waggaa dheeraa dura osoo Meesiifi Ronaaldoon warri deggeran hin uumamiin, seenaa uumametu ka'umsa masaanummaa isaaniidha.
Akka seenaan agarsiisutti, warri Katalooniyaa gama kaaba-bahaa Ispeen keessatti biyya walabaa turan. Akka biyya walabaa tokkoottis afaan ofiifi aadaa badhaadhaa ittiin boonu qaba.
Magaalaan qarqara galaanaa taate Baarseloon ammoo wiirtuu Katalooniyaadha. Garuu waraanaa Daayinaastii Bourbon fi Habsburg gidduutti waggoota 15 tiif taasifameen Katalooniyaan bara 1714 walabummaashee dhabuun qaama Iespeen waloomtee taateetti.
Kilabiin Baarseloonaa magaalaa guddittii Katalooniyaa keessatti bara 1899 kan hundeeffamte yommuu ta'u, Riyaal Maadiriid ammoo waggaa sadeen booda bara 1902 magaalaa biyyaalessaa guddoo Ispeen keessatti hundeeffame.
Kilabiin Baarseloonaas akka kallacha Katalooniyaa warra hacuucamaniifi fottoquudhaaf qabs'aaniitti fudhatame. Kanarraan ka'een ammoo, Riyaal Maadiriid akka masaanuu isaa guddaatti ilaalamuun muramte.
Walqeequufi walitti bu'uun kilaboota lamaanii dirree ispoortii irra darbee siyaasaafi hundee aadaa deggertoota kilabootaa keessatti bu'uura gadi fagoo godhataa dhufe.
Rakkoon warra Katalooniyaa (Baarseloonaa) mootummaa giddu-galeessaa Ispeen waliin qaban siyaasa ammayaa biyyattii keessatti rakkoo fala hin argatiin ta'ee hanga harraatti rkkoo dirree kubbaa keessatti mul'atu ta'aa jira.
Meesiin taphoota idila-addunyaarratti akka hin hirmaanne dhorkame
Katalooniyaan naannoo gariin walabummaa ofii qabdu kaaba-baha Ispeenitti argamtudha. Onkoloolessa bara 2017 biyya walabaa ta'uudhaaf rifereendamii gaggeessaniin Katalooniyaan sagalee %90 ta'uun deggersa argatus Manni Murtii Heera Mootummaa Ispeen garuu seeraan ala jechuun kuffiisee ture.
kanaan walqabatees, namoonni Katalooniyaan akka fottoqxu gaggeessan sagal hojii rifereendamii kanaan walqabatee waggaa sagalii hanga 13 itti murtaa'uun hidhamaniiru.
Kanaan walqabatee warri Katalooniyaa Baarseloonaa keessatti walitti fufinsaan mormiitti jiru.
Keessumaa Wixata darrbe erga namoonni saglan kudhan hidhamanii magaalattii guutummaatti mormiitti jirti.
Sababiin siyaasa kilaboota kana biraa hin hafne tapha Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid gidduutti Onkoloolessa 26, 2019 Nou Camp tti ture yaaddoo nageenyaaf shakkii uumeera.
La Ligan sodaa nageenyaa jiru kanarraa ka'uun Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ispeen (RFEF) tapha kana akka Baarseloonaarraa gara Maadiriiditti jijjiiramuuf gaafateera.
Koreen dorgommii RFEF kilaboonni lamaan yaada isaanii akka irratti kennan gaafachuun Kamisa Onkoloolessa 24 akka murteessu eegama.
Hata'u malee, gaabaasonni Iespeen keessatti dhaga'amaa jiran ammoo Federeeshiniin Kubbaa Miilaa biyyattii tapha kana Nou Camp irraa gara Bernabeu tti jijjiiruu caalaa akka hanga Muddeetti turu murteesssuu ilaalaa jira kan jedhudha.
Muuziqaa kumbiyaa gahumsa Mesiif?
Leenjisaan Baarseloonaa Ernesto Valverde ammoo dirree ofii dhiisanii gara warra Maadiriid deemuun Bernabeu irratti taphachuumormaniiru.
"Nuti akka El Clasico'n Bernabeu'tti taphatamu waan hin feeneef sagantaa bahe akka kabajamu barbaanna. Ammallee yeroon torban tokkoo olitti jira," jedheera Valverde'n.
Deggertoonni Baarseloonaas maqaa jeequmsi uumameetiin El Clasico qe'ee isaaniirraa fudhachuun carraa dirree masaanuu isaaniitti geessudha jedhanii yaadu.
Himannaa gudeeddii Kiristiyaanoo Ronaaldoo: 'Nike' yaaddoo guddaa qabaachuu ibse
Ronaaldoon dhimma gudeeddii raawwateera jedhameen hin himatamu
Luwis Enriikee: Mucaan leenjisaa duraanii Baarseloonaa fi Ispeen umurii waggaa sagaliin boqatte
Filannaa FIFA: Luukaa Moodirichiifi Maartaataan milkaa'aniiru
25 Fuulbana 2018
Waancaa Addunyaa 2018: Muuziqaan kumbiyaa gahumsa Mesiif fooyyesuuf qoricha tahaa laata?
Mesiin taphoota idila-addunyaarratti akka hin hirmaanne dhorkame
Dargaggoo Poolisii Somaaleen rukutamee waggoota sadii hospitaala ciisu
Namoota awwaalcha sobaa ofiirratti hirmaatan
Qondaalli ODP Wallagga Lixaatti ajjeefaman
Buuganviil addunyaaf biyya haaraa ta'uu dandeessii?
Biyya maallaqni namoota hedduu harka namoota maallaqa gurguran keessa jiru
Sidaamaan rifarandamii naannoo ta'uu murteessuuf sagalee kennaa jiru
'Guyyaan kun aarsaa guddaa booda dhufe' kantiibaa magaalaa Hawaasaa